Mahatakatra ireo toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainana (1)
"Sahy tao amin'Andriamanitray izahay hiteny taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoherana." 1 Tesaloniana 2:2
"Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa ... amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra." Efesiana 6:12
Tany Afrika i Patrick, nankany amina tanàna mitokana iray mba hitory ny Filazantsara. Fahavaratra ny andro, ka tena ratsy ny lalana. Vao niainga kelikely izy dia vaky tampoka ny kodiaran'ny fiarany. Tokony tsy hankany ve, ka hiverin-dalana? Tsia, resy lahatra i Patrick fa tokony hanohy ny diany. Nosoloiny ilay kodiarana, tao anaty ranonoram-be, dia lasa izy nanohy ny lalany. Kotsa tanteraka izy nony tonga, saingy tonga soa aman-tsara!
Tohina noho ny fikirizany ny mponina tao an-tanàna, ka nifampiteny hoe: «Tena zava-dehibe angamba no tiany holazaina amintsika». Noho izany dia marobe izy ireo no tonga nihaino sy nanongilan-tsofina tamin'ny hafatra nentin'i Patrick, ka dia maro ny voataona hanaiky an'i Jesosy ho Mpamonjiny.
Nahoana moa i Patrick no tsy niverin-dalana? Satria fantany fa tia ireo olona ireo Andriamanitra ary te hamonjy azy ireo. Tsy nanaitra an'i Patrick akory ilay fahavoazana nanorisory nitranga, satria fantany fa mitady izay fomba rehetra i Satana, hanoherana ny Filazantsara. Raha niverin-dalana i Patrick, dia ho nandresy i Satana. Koa tsy nanaiky hokorontanina na hokiviana izy. Navelan'Andriamanitra hitranga io toe-javatra mahasorena io, mba hamoahany zavatra tsara. Ary izany tokoa no niseho!
Ry kristiana, isika rehetra dia tojo sakana eny amin'ny lalantsika. Indraindray Andriamanitra dia te hanakana antsika, ka tsy tokony hikiry isika, raha mizotra amina lalan-diso. Nefa aoka kosa isika tsy ho mora kivy, raha vao misy zava-tsarotra mitranga. Raha fantatsika fa ankasitrahin'Andriamanitra ny ataontsika, dia aoka handroso am-piadanana sy hatoky Azy. Hovainy tokoa ireo tranga sarotra, mba hanjary toe-javatra mitera-boka-tsoa, ary izany dia ho voninahiny.